စကားလုံးများနဲ့ ​နေ၀န်းနီ – ၂ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » စကားလုံးများနဲ့ ​နေ၀န်းနီ – ၂
စကားလုံးများနဲ့ ​နေ၀န်းနီ – ၂
Posted by naywoon ni on May 19, 2014 in Creative Writing, Drama, Essays.., My Dear Diary | 12 comments
နေ၀န်းနီ - ကိုယ်​​တွေ့
ကိုခိုင်​ကပါ စိတ်ဝင်​စားတယ်​ဆို​တော့ မြန်​မာပြည်​မှာ ​ကော်​ပီရိုက်​ ရှိတယ်​ / မရှိဘူး အထင်​အရှား ပြဆိုမရ​ပေမဲ့ လွန်​ခဲ့တဲ့ နှစ်​သုံးဆယ်​ ​လောက်​က စာ​ပေသမား​တွေ လက်​ခံ လိုက်​နာ​နေတဲ့ စည်းကမ်း​တော့ ရှိတယ်​ဗျ ။ ​ကော်​မန့်​ တစ်​ခုမှာ ထည့်​​ရေးပြီးလို့ ဖြုတ်​ချထားခဲ တာ ပြန်​​ပြောဦးမယ်​ ။ အဲ့ဒိအချိန်​​လောက်​က ကိုခိုင်​ မြန်​မာပြည်​မှာရှိဦးမလား ???
ဒဂုန်​တာရာရဲ့ ​လေနု​အေးက ​နော့ဆဲကို ဆိုတဲ့စကား ။ ကဗျာမှာသုံးခဲ့တာ​တောင်​မဟုတ်​ဖူး ။ ” ​မေ” ဆိုတဲ့ ၀တ္ထုမှာ သုံးခဲ့တာ ။ ​နောက်​ပိုင်း မင်းသား ရန်​​အောင်​က ” ​လေနု​အေး” ဆိုတဲ့ နာမယ်​နဲ့ စီးရီး တစ်​​ခွေ ထွက်​​တော့ ဒဂုန်​တာရာ ရဲ့ ဘက်​​တော်​သား​တွေ စာနယ်​ဇင်းက ​နေ အုတ်​အော်​​သောင်းသဲ လုပ်​လို့ စကားလုံး အသုံးပြုခ ငါး​ထောင်​နဲ့ ကန်​​တော့ ရပါ​ရောလား ။ ​ရွှေတစ်​ကျပ်​သား တစ်​​ထောင်​​လောက်​ပဲ ရှိ​သေးတာ​နော်​ ။
​နောက်​ ပန်းမြိုင်​လယ်​က ဥယျာမှူး ရုပ်​ရှင်​ဇာတ်​ကား ထွက်​လာ​တော့လည်း ၀တ္ထု ​ရေးခဲ့ဖူးတဲ့ ဆရာလယ်​တွင်းသား ​စောချစ်​ကို ခွင့်​ပြုချက်​​တောင်းရဖူးတယ်​ ။ ဇာတ်​လမ်းက ဆရာလယ်​တွင်းသား​စောချစ်​​ရေးတဲ့ ၀တ္ထု ကိုပြန်​ရိုက်​တာမဟုတ်​ဘူး ။ ​ခေါင်​စဉ်​​လေးပဲတူတာ ။
အဲ့​တော့ မြန်​မာပြည်​က စာ​ပေသမား​တွေ က ​” ​လေနု​အေး ”
ဆိုတာ ဒဂုန်​တာရာရဲ့ မူပိုင်​ “ပန်းမြိုင်​လယ်​က ဥယျာဉ်​မှူး ” က လယ်​တွင်းသား​စောချစ်​ မူပိုင်​ တစ်​ညီတစ်​ညွှတ်​ထဲ သတ်​မှတ်​လိုက်​သလိုပဲ ။
​အစက အဲ့ဒါ စည်းကမ်းအဖြစ်​သတ်​မှတ်​ထားတာမဟုတ်​ဖူး​နော်​ ။ စာ​ပေသမားချင်း တစ်​​ယောက်​နဲ့ တစ်​​ယောက်​ ​လေးစားသမှု နဲ့ ​စောင့်​ထိမ်းတာ :)။ တစ်​​ယောက်​​ယောက်​က သိသိနဲ့ သုံးရင်​ပဲဖြစ်​ဖြစ်​ မသိလို့ သုံးမိရင်​ပဲဖြစ်​ဖြစ်​ မှီရာ​နေရာက သိတဲ့သူက လိုက်​​ထောက်​​ပေးကြတယ်​ ။
အစပိုင်းက ​ပြောလိုက်​မိတဲ့ မြန်​မာပြည်​မှာ ​ကော်​ပီ ရိုက်​ ရှိတယ်​/ မရှိဘူး မထင်​ရှားဘူးဆိုတာက ဒီလိုဗျ ။ ရှိတယ်​ဆိုရင်​လည်း အဲ့ဒိဥပ​ဒေ ကို ကျွန်​​တော်​မ​တွေ့ဖူး​သေးဘူး ။ မခိုင်​မာတဲ့ ဥပ​ဒေ တစ်​ခု​တော့ ရှိပုံရပါတယ်​ ။ ဘာဖြစ်​လို့လဲဆို​တော့ မူပိုင်​ခွင့်​ကို တစ်​​ယောက်​​ယောက်​က ထပြီး တရားစွဲမှ တိုင်​မှ အ​ခြေအတင်​ငြင်းခုန်​ကြယုံ အဆင်​ပဲရှိ​သေးတယ်​ ။ ​စော​စောက ​လေ နု​အေး တို့ ဥယျာဉ်​မှူး တို့က​တော့ သီချင်း​ခွေကလည်း ထွက်​ပီးချိန်​ ဟရုပ်​ရှင်​ကားက လည်း ပြန်​ပြင်​လို့မရတဲ့ အချိန်​ စကားလုံးအသုံးပြုခွင့်​ ​တောင်းပန်​ ကန့်​​တော့​တော့ လည်း ကာယကံရှင်​​တွေကလက်​ခံ ဒါ​ပေမဲ့ စာနယ်​ဇင်းမှာ​တော့ ဂ ယက်​ထသွားခဲ့​သေးတာပဲ ။
​နောက်​သီချင်း​တွေကျ​တော့ အ​နောက်​တိုင်းသံစဉ်​ စာသားကို မြန်​မာ စကားလုံးအစားထိုးပြီး​ကော်​ပီထုတ်​ခွင့်​​ပေးထား​တော့ ​ကော်​ပီ ရိုက်​ ရှိမရှိ မထင်​ရှားဘူး လို့ သုံးလိုက်​မိတာ ။ သံစဉ်​ကိုယူပြီး စာသားကိုသာ အစားထိုးတာဗျ ။ အဲ့အစားထိုးထားတဲ့ မြန်​မာ စကားလုံးကိုကျ​တော့ အငြင်းအခုန်​ဖြစ်​ကြ​သေးဗျ ။ သူသုံးပီးသား ငါသုံးပီးသား နဲ့ ။ ဘယ်​သူဘယ်​​နေရာမှာ သုံးထားပီးသား စကားလုံး ဘာညာ သာရကာနဲ့ ။ အစရည်​ရွယ်​ချက်​ ဒီအ​ကြောင်းဆက်​​ရေးဖို့ မဟုတ်​ဖူး ။ စကားလုံး အဓိပ္ပာယ်​ ရှာတဲ့ အ​ကြောင်းနဲ့ စကားလုံး အသုံးပြုပုံ အ​ကြောင်းဆက်​​ရေးမလို့ ။ ဒါမှ စကားလုံး​တွေကို ကဗျာသမား​တွေ ဘာ​ကြောင့်​ တန်​​ကြေးထားတယ်​ဆိုတာ ပိုထင်​ရှားလာမှာ မဟုတ်​လား ။ ခုဟာက ​ကော်​ပီရိုက်​နဲ့ ပတ်​သက်​လို့ ကိုခိုင်​စိတ်​၀င်​စားတယ်​ဆိုလို့ ​နောက်​ မသိ​သေးတဲ့ သူ​တွေ လည်းသိ​အောင်​ ဆက်​​ပြောတာပါ ။ ဥပ​ဒေနဲ့ တင်းတင်းကြပ်​ကြပ်​ကြီး ချုပ်​ချယ်​ထားတာ​တော့မရှိဘူး ။ ( ဒါကလည်း ​နောက်​ပိုင်းမှာ မလိုက်​နာတဲ့ သူ​တွေ ရှိလာလို့ပါ ။ ထင်​ရှား​အောင်​ပြရရင်​ စာ​ရေးဆရာ ​တော့ ကျွန်​​တော်​ ဖတ်​တဲ့သူမဟုတ်​လို့ မမှတ်​မိဘူး သူငယ်​ချင်း (ဗစ်​တာစိုးမ်ိုး) ရဲ့ စာအုပ်​ဆိုင်​သွားသွားထိုင်​​နေလို့ ​တွေ့လိုက်​မိတာ ။ ​ရှေ့မှာ လွန်​ခဲ့တဲ့ နှစ်​ သုံးဆယ်​ အ​ကျော်​​လောက်​က နာမယ်​ကြီးခဲ့တဲ့ ရုပ်​ရှင်​ကား ” အကယ်​၍သာ” ဆိုတာ ကို​ပေါက်​တို့ အရီးခင်​လတ်​တို့ အဘ​ဖော တို့ မှီမယ်​ ကျွန်​​တော်​ ​ကော်​ပီအသစ်​ပြန်​ကူးမှကြည့်​ရတာ ။ အဲ့ဒါ ၀တ္ထု ​ခေါင်းစဉ်​​ပေးထားတာ​တွေ့ခဲ့သဗျို့ ။ မသိလို့ပဲလား ။ ​မေ့​လောက်​ပီဆိုပီးပဲ လုပ်​သလား ။ ဒီစကားလုံးက အများနဲ့ ဆိုင်​တာပါလို့ပဲ ယူဆပီးလုပ်​သလား ကာယကံရှင်​မှသိ​ပေလိမ့်​မယ်​ အဲ့ဒိလို သုံးမှာစိုးလို့လားမသိဘူး ။ ခုရုပ်​ရှင်​ VDO ဇာတ်​ကား နာမယ်​​တွေက အများသုံးစာလုံးနဲ့ ဘန်းစကား​တွေရှိဖြစ်​​နေတာ ။ လာထားတို့ ​ဟော့​ရှော့ ခ်​ တို့ ​လေ အဟိ ။ )
“မေ”မှာပါတဲ့.. ထိပ်အဖွင့်စာလုံး “ လေနုအေးသည် တနွဲ့နွဲ့နော့နေဆဲကို” … ဆိုတာ.. ဆရာကြီးဒဂုန်တာရာ မူပိုင်တယ်မပိုင်ဘူးဆိုတာထက်.. သူ့စာသားစကားဆိုတာအသိအမှတ်အကုန်ပြုထားကြတာမို့.. အဲဒါကို သာမန်ယူသုံးရင် (သာမန်အားဖြင့်) ကော်ပီရိုက် ချိုးဖောက်တယ်လို့တော့ တယ်မထင်..
ဒါကို ကိုယ့်အခွေ..ကိုယ့်အနုပညာမှာယူသုံးပြီး အခကြေးငွေတခုယူတယ်.. စီးပွားဖြစ်မှာသုံးမယ် ဆိုရင်တော့..
ဒါကလည်း ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင်က.. တရားစွဲပြီး နစ်နာမှုကိုတောင်းဆိုမှပါ..။
မြန်မာပြည်မှာဖြစ်နေတာက.. သူရဲကောင်းတော်တော်များများပေါ်လာပြီး.. (ကြားထဲက) ၀င်ပြောတာမို့.. ဟိုမှာဖက်က စီးပွားရေးသမားလည်း.. မထူးဘူးဆိုပြီး.. ၀ယ်တာဖြစ်သွားဟန်ရှိပါတယ်..
ဥပဒေကြောင်းအရမဟုတ်.. အုပ်စုနဲ့”ဖိ”လို့..” နု”ပေးလိုက်ရတဲ့သဘောကို တွေ့ရပါတယ်..။
စီးပွားရေးသမားက.. ကြော်ငြာသဘောသက်အောင် လုပ်သွားတယ်ဆိုပါစို့..
နာမယ်တွဲလှလှတွေ.. ပေးမသုံးကြေးဆို.. ဆရာကြီးယုဒသန်တို့..၊ ဦးဖေမောင်တင်တို့၊ မန်လည်ဆရာတော်ကြီးတို့၊ ဆရာကြီးသခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းတို့ရဲ့ မြန်မာစာ-စကားအသစ်ထားပေးခဲ့မှုတွေလည်း သုံးမရပြုမရနဲ့.. မြန်မာစကားတွေနဲ့မြန်မာတွေ ဒုက္ခများမယ်… ထင်..။
“ဝါးပင်ကြားမှ နေဝန်းနီ” ဆိုတဲ့ကဗျာက.. ဆရာဒဂုန်တာရာစပ်တာနော့…။
ပထမတပုဒ်ကတည်းက ဖတ်ဖစ်တယ် အဘနီရေ…
သဂျီးက ပေ့တန့်တွေ ဖဲယားယုစ့်တွေ နဲ့ (ပါလာပြန်ဘီ သည်ယုစ့် အော်.. ယုစ့် ယုစ့် )
စူဘရာနို တီးနေလို့ ရူးချင်ယောင်ဆောင်နေတာပါ…
တကယ်တော့ဗျာ.. စကားလုံးတွေကို မူပိုင် ပေးကြဖို့ ဆိုရင်..
မူပိုင်ခွင့် ဥပဒေ ရှိဖို့ လိုအပ်သလို အဆိုပါ မူပိုင်ခွင့် ဥပဒေအရလည်း တရားဝင်
ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်ကြောင်း ၀ယ်ယူထား ကန့်သတ်ထား ဖို့ private property ဖြစ်ကြောင်း
အဲ့လို လုပ်တဲ့နေရာမှာလည်း တကယ်တမ်း အများသုံးဖြစ်နေတဲ့ စကားလုံး မျိုးကို
private လုပ်ခွင့်မရှိဘဲ ..ကိုယ်တိုင် ထွင်သုံး တွဲစပ်သုံးထားတဲ့ စာလုံးမျိုးကိုသာ
private လုပ်ခွင့် ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆြာ့ ဥပမာထဲကလို “လေနုအေး” ဆိုတဲ့အသုံးကတော့ ..သိပ်ကို common ဖြစ်လွန်းတာကြောင့်
private လုပ်ဖို့ မသင့်တော် ပေမယ့် ” လေနုအေးသည် တနွဲ့နွဲ့နော့နေဆဲ” ကို private
လုပ်မယ် ဆိုရင်တော့ လုပ် လို့ ရကောင်းပါတယ်။
“ပန်းမြိုင်လယ်” တို့ “ဥယာဉ်မှူး” တို့ ဆိုရင်လည်း အလားတူပါပဲ .. “ပန်းမြိုင်လယ်က ဥယာဉ်မှူး” ဆိုတဲ့
အတွဲလိုက်ကိုတော့ private လုပ်လို့ ရစကောင်းပါတယ်။ လို့ မြင်မိပါတယ်
သဂျီးပြောတဲ့ … ဘာသာစကားအတွင်းက ရှိပြီးသား စကားလုံးတွေကို ပြန်တွဲတဲ့ အတွဲအစပ်သာ
ပြန်တွဲထားတာမို့ … ဒါငါပိုင်တဲ့ စကားလုံး ငါ့ခွင့်ပြုချက် ရမှသုံး ဆိုတာမျိုးထိတော့
တားမြစ်လို့ မရစကောင်းပါဘူး။ တခုပဲ … ရုပ်ရှင်ခေါင်းစီး စီးရီးတိုင်တယ် စတဲ့ ငွေကြေး ပါဝင်မှုရှိတဲ့
အနုပညာ စီးပွားရေး ပစ္စည်းရဲ့ ခေါင်နေရာတွေမှာ သုံးရင်တော့ ဥာဏ်ပူဇော်ခ ပေးသင့်တဲ့ (ပေးရမယ့် မဟုတ်ပါ)
မူပိုင်ခွင့် ဥပဒေတွေ ရှိပါတယ်။ ခေတ်မမီတာ .. အသုံးနည်းတာ တန်ရုံ လူတွေ မထိတွေ့ကြတာပါ။
(လုံလောက်တဲ့ အကာအကွယ်လည်း မရတာကြောင့် အားမကိုးတာ လည်း ပါမှာပါ)
ခိုးပဲချချ.. ဗြောင်ပဲ ယူသုံးသုံး တရားစွဲ တောင်းရင်လည်း မူပိုင် မလုပ်ထားတာမို့ နိုင်မှာ မဟုတ်ပေမယ့်…
ဆြာပြောတဲ့ ၀ိုင်းထောက်ပြကြ ပြောကြတာ (သဂျီးပြောတဲ့ သူရဲကောင်းတို့ ထွန်းကားတာက)
ပေါ်လာတယ် ဖြစ်လာတယ် လို့ မြင်မိပါတယ်။
တကယ်က စကားလုံးတွေ မူပိုင်ပေးရတာ အပေါ်ကိုက အင်မတန် သိမ်မွေ့ ရှုပ်ထွေး လွန်းပါတယ်။
တခါက ဟောလိဝုဒ် က အော်စကာ ချီးမြှင့်ရေးအဖွဲ့က အော်စကာ ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို
သူတို့ မူပိုင် အဖြစ် ပြဌာန်းဖို့ လုပ်တာ ရှုံးတယ်လို့ ဖတ်ဖူးပါတယ်။ အကြောင်းကတော့
ကမ္ဘာတန်းမှာ အော်စကာဟေ့ ဆိုရင် သူရို့ ချီးမြှင့်တဲ့ အရုပ်ကိုပဲ လူတိုင်း ပြေးမြင်ကြမှာ ဖြစ်ပေမယ့်
တကယ်က သူရို့ တီထွင်ထားတဲ့ စကားလုံးမဟုတ်ဘဲ မြေထဲပင်လယ် ဒေသကနေ စီးဆင်းရွေ့လျောလာတဲ့
စကားလုံးဖြစ်လို့ ပါပဲ။ အဲ့သလို ကန့်သတ်လိုက်ရင် အတော်လေး ဂွကျကုန်မယ့် သဘော။
ဟို ချယ်လ်ဆီးက ဘောသမားလေးတောင် နာမည်ပြောင်းရမယ့် ကိန်း။
ဆက်ရရင် ၁၉၁၁ မြန်မာ ကော်ပီရိုက်ဥပဒေဆိုတာ ရှိပါတယ်
အကြမ်းဖျဉ်း ဖတ်ကြည့်တာအရ ပြည်တွင်း ဖန်တီးမှုတွေကို ကာကွယ်မှုပေးထားတယ် (ထိရောက်တာမထိရောက်တာတပိုင်း)
နိုင်ငံခြားက လာတဲ့ဟာတွေကိုတော့ ထည့်သွင်းရေးသား ဖော်ပြထားခြင်း မရှိလို့ ..သိရပါတယ်….။
ဒန် တန့် တန်…။
အဲ့သည့်မှာ စတွေ့တာပဲ…။ တလောလေးက ခေတ်စားတဲ့ အန်းဒရိုက် ကို မူပိုင်ခွင့် လျောက်တဲ့ ဖုန်းဆိုင်တို့..
အန်းဂရီးဘတ် ကို ကိုယ်ပိုင် ကြေငြာတဲ့ စတေရှင်နရီ ဆိုင်တို့ ..ဆိုတာ … ဇာတ်လမ်းက အဲ့မှာ စတာပဲ။
ဥပ​ဒေအ​ကြောင်း​တွေပါလာလို့ ဝင်​​ပြောမယ်​။ မြန်​မာ့ဥပ​ဒေလက်​စွဲတဲ့ ဥပ​ဒေအ​ကြောင်းကို လူတိုင်းနားလည်​​အောင်​ စကား​ပြေနဲ့ ပြန်​​ရေးပြီး ထု​တာ။ စိတ်​ဝင်​စားလို့ တအုပ်​ဝယ်​ထားတယ်​။ စကားအတင်းစပ်​ အဘနီရှင့်​ ​နေပြီ​တော်​ရောက်​​တော့ အဘနီကို လာ​တွေ့ချင်​တာ က​လေးနှစ်​​ယောက်​နဲ့ မအားတာနဲ့ စိတ်​ကူးသာရှိပြီး လ်​​တွေ့ အ​ကောင်​အထည်​မ​ဖော်​နိုင်​ခဲ့ဘူး။
​ဟောဗျာ ကျွန်​​တော့ ဆီ မက်​​ဆေ့ပို့လိုက်​ရင်​လာ​တွေ့မှာ​ပေါ့ ကျွန်​​တော်​က အချိန်​ပြည့်​အား​နေတာပဲ က​လေး​တွေဝိုင်းထိန်း​ပေးဆိုလဲ နာနီ လုပ်​​ပေးမှာ​ပေါ့
ကျွန်​​တော့ fb လင့်​
ကျနော့ဖြင့် ညကြီးမိုးချုပ် မျက်စိတွေလည် လမ်းတွေမှားလို့
ညဖက်မြင်ကွင်းတွေပြောင်းသွားတော့ အဝိုင်းကကြာပွင့်တွေကို အမှတ်မှားသွားတာ
” တိန် တိန် နှစ်ခါတိန် ” ဆိုတဲ့စကားကို ယူသုံးတဲ့သူတွေ့ ရင်တော့ ပက်သနာ ရှာမယ် ဒါဗြဲ
တာဝတိံသာမှ အက်ဆေးများ ဆိုတဲ့ စကားစုကို မူပိုင်ခွင့်ထားရင် ကောင်းမလား….
မောင်ရင်တို့ အိုင်တီဆရာတွေ ဆော့ဖ်ဝဲ တစ်ခုရေးကွာ
မြန်ပြည်တလွှား မူပိုင်စကားလုံးများဆိုပြီး ။
ကျုပ်တို့လည်း ရေးတော့မယ်ဆို အဲဒီဆော့ဖ်ဝဲ နဲ့စစ်လိုက်ရင် အိုကေသွားမှာပေါ့
မောင်ဂီပြောတဲ့..“ဆြာ့ ဥပမာထဲကလို “လေနုအေး” ဆိုတဲ့အသုံးကတော့ ..သိပ်ကို common ဖြစ်လွန်းတာကြောင့်
အတွဲလိုက်ကိုတော့ private လုပ်လို့ ရစကောင်းပါတယ်။ လို့ မြင်မိပါတယ်”
common ဖြစ်လွန်း တဲ့မြန်မာစကားလုံးတွေကို private လုပ်နေကြရင်တော့ ခက်ရချည်ရဲ့ဗျာ
common ဖြစ်လွန်း တဲ့မြန်မာစကားလုံးတွေကို private လုပ်​ကြရင်​ အ​ပျော်​ဖတ်​ ၀တ္ထု​တွေနဲ့ vdo ဇာတ်​ကား​တွေ အကုန်​ထိမှာပဲ ။ TV က လာတဲ့ ​ကျော်​ညာ​တွေ​ကောပဲ ။